The Buuxi Guide Si Travel In France By tareenka | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Faransiiska > The Buuxi Guide Si Travel In France By tareenka
Waqtiga Akhriska: 11 daqiiqo(Last Updated On: 19/09/2020)
France ayaa muddo dheer u jecel iyo mid ka mid ah dalxiis ugu caansan Meelaha in Europe. Marka la eego in ay tahay dalka ugu weyn ee ku yaala galbeedka Europe, waxa macno u safar tareen. Dowladda Faransiiska ayaa maal khadadka-xawaaraha sare (dahab Large TGV xawaare line) iyo tareenada-xawaaraha sare (Speed ​​Tareen tareen Great dahab TGV). Waxaa jira in ka badan 1056 miles (1700 km) of khadadka-xawaaraha sare ee dadaalka badan iyo sidoo kale kun oo miles of khadadka ugu muhiimsan oo yar yar. Ku dhawaad ​​waddanka oo dhan waa laga helo nidaamka tareenka Faransiis. tareenada France ayaa ku ool ah, soomi, oo waxaad ka heli doontaa meesha aad rabto si ay u tagaan dalka gudihiisa iyo sidoo kale in ay ama ka dal kasta deriska. Haddii aad tahay qofka socotada-markii ugu horeysay ah ee France, sida ugu fiican ee si aad u hesho agagaarka isticmaalaya safarka tareenka waa iyada oo loo marayo qorshaynta safarka taxaddar. Si kastaba ha ahaatee, network tareenka yar wareeriya noqon kartaa, gaar ahaan marka aanad ku hadlin ama akhri Faransiis. Si aad caawimo inaad fahamto nidaamka tareenka ee France, Waxaana ku Abuuray hage dhamaystiran safarka France oo dhan tareen.
In hagahan, waxaad ka heli doontaa wax walba oo aad u baahan tahay in la ogaado si ay u abuuraan qorshaha safarka shakhsi. Waxa kale oo aanu ku siin doonaa warbixin ku saabsan shirkadaha tareenka kala duwan oo ka shaqeeya France iyo noocyada tareenada. Waxaan idin siin doonaa talooyin qiimo leh oo ku saabsan gadashada tikidhada qiimaha ugu yar, dulmarka nidaamka tareenka, faa'iidooyinka baas rail, iyo helitaanka agagaarka France ka soo Paris. Ka dhig wax akhriska The Buuxi Guide Si Travel In France By Tareen in la ogaado sida ay u safri France tareen.
Sidee Tigidhada In France Si Buy tareenka
Halkee ayaan ka iibsan kartaa tigidhada tareenka for booqashadaydii France?
Waxaa jira dhowr hab fudud oo ku habboon ama websites u soo iibsan tigidhada tareenka Faransiis. Waxay yihiin si caddaalad ah u fudud in la isticmaalo, laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah la timid quirks iyo oddities u gaar ah oo ay tahay in aan u baahanahay in la tilmaamo.
Save Tareenku waa shirkad in si digital ah iyo galisay rail tigidhada. Booqo website-, isbarbar dhig qiimaha tareenka, dooran line tareenka, iyo nooca kursiga aad rabto in aad. Waxaad ku bixin kartaa kaadhka amaahda ama xataa Seeraar aad. Xaaladdan oo qiimaha tigidhka tareenka ayaa lagu dhibciyo, madal kuu sheegi doonaa iyo caawimo aad beddelan qiimo ka jaban.
When helitaanka bogga rasmiga ah ee Tareennada Faransiis, aad ugu badan tahay in aad wareejiyey RailEurope.com, oo waa wehelkaaga rasmiga North American of Faransiis Tareennada. Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer ma waxaad ka heli doontaa qiimaha jaban on Rail Europe. Sidaa darteed, waa inaad markasta fiiro gaar ah u yeelatid in qiimaha tareenka ee ugu jaban uu ku yaal Save A Train.
Saldhigga Tareenka The
Waxaa jira laba siyaabood oo ay u soo iibsadaan tikidhada tareenka Faransiis saldhiga - daaqad tigidh iyo mishiinka iibiyo. English-ku hadla iyaga ka iibsan kartaa hab midkood, laakiin haddii English ma aha in wanaagsan oo aan qofka ula xiriiri karaa daaqadda tigidh si fiican u, mishiinka iibiyo waa bet aad ugu fiican. Waa ay fududahay in Dul, iyo xataa inaad bedesho qaabka ay luqada. Gadashada tigidhada ka mishiinka iibiyo baahan tahay Chip ah & credit card PIN.
Sidee baan u ururiyaan tigidh online my?
Waxaa jira dhowr hab oo loo ururinayo tigidhada aad:
Soo qaado saldhiga. Si ay u ururiyaan tigidhada aad saldhiga, waxaad isticmaali kartaa lambarka macluumaadka jaale ama credit card (mid la mid aad loo isticmaalo si ay u iibsadaan tigidhada).
Print-at-home tikidhada. Ka dib marka aad heshid tikidhada elektaroonigga ah, waxaad iyaga ku daabacan kartaa oo aan u muujiyo in kaari tareenka kaasoo ay hubinaysaa tigidhada.
tigidhada Electronic. Haddii aadan rabin in ay daabacdo tigidhada aad, waxaad iyaga ku soo bixi kartaa in aad telefoon ama kiniin. kaliya aad muujin kartid kaari ee tigidhka via aad telefoon ama kiniin shaashadda.
tigidhada boostada. Adeegyada qaarkood waxay bixiyaan fursado fiican oo ay kuu soo dirayaa tigidhada boostada caadiga ah. Si kastaba ha ahaatee, in uu yahay habka aad u gaabis ah, Sidaa darteed iyo, ma doorasho lagu talinayo.
Waa in aan soo iibsan tigidhada tareenka ka hor?
Waxaa jaahwareerin karaan in la ogaado oo tareen tigidhada laga iibsan karaa mar kasta oo taas waa in la soo iibsaday ka hor, maxaa yeelay, waxaa jira dhawr nooc oo ah tareenada iyo adeegyada tareenka kala duwan.
tareenada Regional / degaanka. tareenada Gobolka iyo kuwa maxalliga ah xidhmaan meelaha magaalada hareeraheeda ah iyo kuwa goboleed. Reer iyo Transilien Connect hareeraheeda Paris, halka ter tareenada (Tareen Regional Expres) waa tareenada gobolka in ay ku xirmaan xarumaha gobolka iyo magaalooyinkeedii yar. Ma aha in aad si aad u iibsato tigidhka tareenka gobolka iyo kuwa maxalliga ah ka hor, kaliya ka iibsan ka hor ka tagay.
tareenada Intercite (IC). tareen An Intercites waa tareen ah express in uusan safarka on khadadka-xawaaraha sare iyo magaalooyinka iyo sidoo kale masaafo gaaban xirta. Waad iibsan kartaa tikidhada IC-da si aad u hesho qiimo dhimis.
tareenada-xawaaraha sare (TGV). tareenada TGV waa Tareenada ugu dhaqsiyaha badan ee France, iyo tigidhada iyaga u diyaar yihiin inay iibsiga 90 maalmood ka hor. Qiimaha iyaga u sii wadaan in ay ku kici taariikhda departure ku dhowaado, hore iyaga ballansan qiimaha ugu hooseeya. tigidh A iibsaday 90 maalmood ka hor laga yaabaa inay € 30. Laakiin haddii aad ahaayeen si ay u soo iibsadaan dhowr maalmood ka hor ka tagay, qiimaha tigidhada ayaa noqon kara ilaa € 100.
tareenada International. Xeerarka isku on jaale hore codsan in tareenada ee caalamiga ah, sababtoo ah waxaa sidoo kale lagu tareenada-xawaaraha sare.
Maxay yihiin faa'iidooyinka tigidhada tareenka pass?
Waxaa jira tiro balaadhan oo ah tigidhada tareenka pass aad isticmaali karto si safarka France oo dhan tareen. Qaar ka mid ah aad u ogolaan in safarka gudahood France iyo dalalka kale ee Yurub, ka dibna waxaa jira baas rail in keliya yihiin safarka gudahood France. Si ka duwan tigidhada tareenka si joogto ah, tigidhada tareenka pass la faa'iidooyinka qaar iman:
dabacsanaanta. Iyada oo tigidh pass xadiidka ah, waxaad ka heli safarka tareenka aan xad lahayn. Just tag saldhigga mar kasta oo aad jeceshahay, tuntay pass tareenka ee xafiiska saldhigga tareenka iyo aad u hesho on tareen soo socda la heli karo.
dhimis. Rail baas caadi ahaan la timid inclusions of dhimis for soo jiidashada, iyaga samaynta doorasho wanaagsan safra miisaaniyadda. Waxay noqon karaan weyn lacag-baado, taas oo dadka sabab baas rail gadashada ugu weyn. tigidhada tareenka daqiiqadii ugu danbeysay wuxuu noqon karaa mid qaali ah haddii aad ha u ballansan ka hor.
sahlanaato. Waxaad uma baahna in ay walwal ku saabsan gadashada tigidh wakhti kasta oo aad rabto in aad tareenka a, laakiin waa in aad leedahay dabacsanaan tan iyo aad haysan doonaa meel on tareen kasta oo aad dooni.
tigidh kuwee rail pass waa in aan iibsashada?
Marka uu iibsigu hal tigidh pass xadiidka ah, aad u dhaxeeya dooran kartaa France Country Pass iyo Multi-Country Pass (Eurail Global Pass).
The France Country Pass waa bet aad ugu wanaagsan haddii aad la dhoofayso kaliya ee France maxaa yeelay waxa ay bixisaa safarka aan xadidneyn ee tareenka shabakadda qaran (oo ay ku jiraan Intercity, ter, TGC, iwm). Waxaad dooran kartaa mid 1 si ay u 8 maalmood oo safar muddo bil ah gudaheed iyo sidoo kale inta u dhaxaysa fasalka koowaad iyo labaad dooran. A Boos kursiga waxaa loo baahan yahay in lagu daro xadiidka mari socdaalka tareenada-xawaaraha sare. Iyadoo dhaafo, sidoo kale waxaad heli dhimis on basaska kala duwan, huuriyada, doonyaha, hotels, matxafyada, iyo soo jiidashada kale.
The Eurail Global Pass waa fursad fiican haddii aad ayaa sidoo kale qorshaynaya in ay u safri doonta dalalka deriska ah. Tani pass multi-dalka waxay bixisaa safarka aan xad lahayn in ay 31 dal oo kala duwan ee Europe (lugu daro France). Iyada oo baas Eurail, ma jirto xadka ay tirada jeer ee aad qaadi karto tareenka. Dooro mid ka mid 3, 5, ama 7 maalmood oo safar hal bil gudahood ah ama 10-15 maalmood oo safar laba bilood gudahood. Xusuusnow in aad sameyso boos ka hor ka tagay.
baas rail intooda badan waxaa warqad ku salaysan, iyo waxaad u baahan doontaa inaad u qorto taariikhda aad ka tagay ka hor safar ugu horeysay ee maalin kasta. Boos Kursiga tareenada-xawaaraha sare ee aad ku kici doonto inta u dhaxaysa € 10 oo € 20 kursi, halka Boos socdaalka caalamiga ah u dhaxayn € 35 milyan euro per kursiga 89 (ku xiran goobta).
FIIRO GAAR AH OO MUHIIM AH: Rail Pass waa kaliya qiimo lacageed haddii aad tababarto safarka in ka badan 14 maalmood, haddii aad u safri ka yar, ka badan hal dhibic si ay tigidhada tareenka dhibic sida waxa Save A tareenka waa qurbaannadiinna bixiyaan qiimaha wanaagsan ee aad lacag.
Marseilles ilaa Waqtiyada Tareenka Lyon
Paris illaa Waqtiyada Tareenka Lyon
Sidee Tigidhada In France Si Isticmaalka tareenka?
On tareenada gobolka iyo kuwa maxalliga ah, laga yaabaa in aad u baahan tahay in safarka la tigidh jirka ah. Tag sanduuqa ansixinta ka hor ka tagay si loo ansixiyo ama "stamp" tigidhka. Haddii aadan u ansixiyo ka hor ka tagay, sug kaari si tuntay halka tareenka. Ma jiraan Boos kursiga tareenada gobolka iyo kuwa maxalliga ah, sidaas oo kaliya fadhiisan meel kasta.
On tareenada-xawaaraha sare, Waxaa jira wakhti gaar ah ku daabacan aad tigidh, iyo tigidh waa ansax ah oo keliya muddo cayiman in. Ma jirto baahi si loo ansixiyo tigidhada, waayo, waxaad leedahay Boos kursi. Hubi in aad ka heli gaariga saxda ah iyo kursiga (lambarada ku qoran yihiin ama ku daabacan tigidhka).
Helitaanka Qiyaastii France From Paris
Marka dalxiisayaal u yimid inuu France, badankoodu waxay Paris ka dhigaan halka ay ka bilaabayaan safarada tareenka ee dalka gudihiisa. Marka laga bilaabo Paris, aad gaari kartid dhow caga kasta oo dalka gudihiisa. Kuwani waa qaar ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee u adeegi ka tareenada PSG.
Gare d'Austerlitz ama Austerlitz Tareen Station – Bordeaux, Limoges, Poitiers, Toulouse, Biarritz, Tours, iyo galbeedka Spain.
Montparnase Tareen Station ama Gare Montparnasse – All TGVs si galbeedka France (Rennes, Nantes, Brest, Brittany)
Gare du Nord – Waqooyi-France, Valenciennes, yar, Calais; Brussels, Cologne, iyo Amsterdam (Thalys); London (Eurostar).
Gare de Lyon – South of France. Montpellier, Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand, Besançon, Marseille, Fiican. Mulhouse ee Bariga France. Catalonia (Girona, Barcelona), Italy, iyo Switzerland (Geneva, Zurich).
Saint Lazare Tareenka Station ama Gare St. Lazare – Le Havre, Rouen, Caen, Cherbourg.
East Station – Nancy. Reims, Metz, Strasbourg, Luxembourg, iyo Germany.
Talooyin Best Waayo Travel In France By tareenka
Waxaan ku siin liiska talooyin weyn oo ka dhigi doonaa safarka tareenka ee France sahlan oo farxad leh.
Kaalay goor hore saldhiga tareenka. La filayo inuu noqon doono saldhiga tareenka ugu yaraan 20 daqiiqo ka hor ka tagay, ama xitaa ka hor haddii aad ku socotay ka saldhigyada tareen weyn, sida Nord Gare du ee Paris. Waayo, dalxiis ah oo uusan ku hadlin ma Faransiis, Ma jiro wax ka xun yimid wax yar uun daqiiqo ka hor ka tagay oo aan fikrad ugu yar ee meel ay aadaan. Imaanshaha waqti hore idin siin doonaa waqti si loo hubiyo Board Departure wixii macluumaad station, garto taas oo madal aad tareenka ayaa ka tagaya, oo hel madal ku habboon.
Weligaa ha ku dhaafin boorsooyinka joogin. laga yaabaa in aad rabto in aad ku socotaan in dukaan dhow fudud qaar ka mid ah ama biyo. Haddii aad go'aansato in aad ku socdaan,, ha ka tegin bac xitaa joogin labaad. Haddii kale, waxaad halis aad adigoo boorsooyinka xaday by tuugag khibrad. tareenada Major ee France (Ku jiraan Paris Gare du Nord, Paris Gare de Lyon, oo saldhigga waa Paris Austerlitz) leeyihiin lookarrada bidix ee kooxda boorsooyinka in tirada kala duwan. Kahor intaadan galin aagga sanduuqa, filayaan in ay leeyihiin bacaha aad X-rayed. Marka saarnaa, meel aad boorsooyinka gudahood aad hortooda halkii ku saabsan meelaha boorsooyinka heegan ah.
Qaataan cunto qaar ka mid ah. Rakaabku waxaa loo ogol yahay in ay cuntada u gaar ah iyo sharaabka soo tareenada, kaas oo waa ku weyn yahay, waayo, raacid tareen long-distance. Tareenada qaarkood waxay leeyihiin cafe a on board, iyo ugu iyaga ka mid ah waxay leeyihiin gaadhigii tarooli in ilaa yimaado a. Nasiib darro, hooyeen mar walba ma iman, iyo cafe ah ayaa la xiri. sidoo kale waxa uu cuntada iyo cabitaanka oo saarnaa waa qaali more. Si aad u loo badbaadiyo lacag, naftaada santuuq geeduhu cunto aad jeceshahay ka hor safar kasta. Waxaa jira dukaamada kala duwan ee xarumaha tareenada ugu halkaas oo aad ka iibsan kartaa cuntada iyo cabitaanka.
download a qorsheeyaha rail app in aad telefoon. Waxaa kala duwan oo qorsheeyaha rail Apps aad ku rakibi karaa oo ay isticmaalaan si aad tareenka u safri sahlan. Our article ku jira oo dhan info iyo tareenka jadwalka tareenada Yurub, iyo apps qaar ka mid ah ma u baahan tahay internet ah. Iyadoo app qorsheeyaha xadiidka ah, waxaad had iyo jeer ku ogaan doonaa in aad tareenka waxaa laga sugayaa inay soo daahay noqon (iyo sida ay u dheer) ama waqtiga, iyo sidoo kale taas oo madal waxay imaan doontaa / tago. In magaalooyinka waaweyn sida Paris, ma jiro mid ka mid ah “ugu weyn ee” Idaacadda, iyo waa ay fududahay in la isku qaldo hal xarun kale. Iyadoo app saxda ah, Hubi in aad noqon doontaa in aad ka heli off xarunta saxda ah.
boorsooyinka. Marka ay timaado in boorsooyinka, waxaad keeni kartaa intii aad qaadi karaan tan iyo ma jiraan miisaanka xad. Waxaad ku kaysan kartaa bacaha aad dusha, ka dambeeya, kursigaagu, ama boorsooyinka ka dhigeysa in aad baabuur.
First-fasalka iyo tigidhada fasalka labaad. Ma jiro farqi badan oo u dhexeeya fasalka-koowaad oo baabuurta fasalka labaad. Si kastaba ha ahaatee, waa aamusan ee fasalka-koowaad, iyo kursiyada hore waa qayb weyn. baabuur-fasalka labaad ayaa sidoo kale si fiican u raaxo. Waxaa xusid mudan in tikidhada heerka koowaad ay ku fadhiyaan 1.5x in ka badan qiimaha fasalka labaad.
Waxaad ma soo celin karo tikidhada jaban. Waxaa laga yaabaa in kaliya hoos u dhaca tikidhada jaban ay tahay in aan la beddeli karin ama aan la soo celin karin.
mashiinada Is-adeegga. Marka la isticmaalayo mashiinka is-adeegaya a, waxaad dooran kartaa doorasho luqadda Ingiriisiga, sidaas darteed ma jirto baahi loo qabo in walwal haddii aadan ku hadlin Faransiiska.
Qaadashada baaskiil. On tareenada maxaliga ah iyo kuwa goboleed, oo aad qaadi karto baaskiil aad lacag la'aan ah. TGVs iyo Intercity Night (tareenada habeen) on a yar oo dariiqyada ogolaado in aad qaadan baaskiil lacag yar (sida caadiga ah ku saabsan € 10). On tareenada kale TGV, waxaad yeelan doontaa in ay ku riday baaskiil aad bac zip-up baaskiil.
samaynta xidhiidhada. Dhinacyada safarka, safarkaaga aad u baahan tahay waxaa laga yaabaa in la beddelo tareenada. tareenada Mase waa caadi sahlan oo dhakhso ah, sidaas darteed ma jirto baahi loo qabo in walwal haddii aadan haysan waqti ku filan oo u dhexeeya tareenada. la xidhiidha tareenka A oo dhanka kale ah madal ama qayb kale oo ah saldhiga tareenka soo gali kara socodka.
Ogow magacyada tareenka. magaalooyinka waaweyn leeyihiin tareenada badan, taas oo abuuri kara jahawareer. Haddii aadan xafidi karo magacyadooda, ku qor hoos on warqad, waxaan iyaga ku badbaadin on your phone, ama isticmaal app qorsheeyaha xadiidka ah.
Mind weerarada tareenka. France ayaa lagu yaqaanaa in weerarada tareenka, oo ay had iyo jeer ugu digo dadweynaha ka hor inta on mid ka mid ah. Iyadoo qaar ka mid ah tareenada weli ku ordi doonaa, weerarada ay yihiin wax ay mushaar fiiro gaar ah u haddii aad rabto in aad ka fogaato ku haboonayn waaweyn.
Isticmaal Chip & credit card PIN. Si aad u iibsato tigidhka ku ah dukaan tigidh iswada, waxaad u baahan doontaa Chip ah & credit card PIN, si loo hubiyo in aad ogtahay code PIN, inkastoo aan ma ku talinaynaa, tan iyo markii ay aad u qaali ah.
All magaalooyinka waaweyn ee France ku xiran yihiin by TGV – shabakadda tareenka-xawaaraha sare leh tareenada in safarka xawaare ku dhowaad 200 mph. Xawaare kuwan, dhammaan aagagga Faransiiska waa kuwa aad gaari karto.
Waxaan loogu talagalay buugan “Buuxi Guide Si Travel In France By tareenka” in lagugu siiyo xoogan oo sida nidaamka tareenka Faransiis ka shaqeeya oo aad caawimo haddii aad ka fikirayso inaad qaadato tareen laakiin ma hubo waxa la sameeyo ama halkii aad ka bilaabi. Haddii aad tahay on quudhin backpacking a, safar ganacsi, ama fasax ah qoyska, waxaan ku helay kugu daboolay, Save A tareenka waa meel ay u soo iibsadaan tikidhada tareenka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “The Buuxi Guide Si Travel In France By tareenka” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-travel-france-train%2F የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#sncf tgv TrainStation tigidhada tareenka tareen safarka traintravelfrance travelfrance